यी हुन एकैपटकमा ४ बच्चालाई जन्म दिएका बच्चाका माता पिता, के भन्छन् शाहीदम्पती ? (भिडियो) – ईमेची डटकम
Posted byईमेची डेक्स September 27, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on यी हुन एकैपटकमा ४ बच्चालाई जन्म दिएका बच्चाका माता पिता, के भन्छन् शाहीदम्पती ? (भिडियो)
काठमाडौँ-धनगढीकी २७ वर्षीया खगित्रा शाहीले बुधवार एकैपटक चारवटा बच्चा जन्माइन्। यो भन्दाअगाडि उनकी ६ वर्षकी एक छोरी छिन्। खगित्रा र उनका श्रीमान पदमबहादुरलाई छोरीपछि अर्को सन्तानको चाहना भयो। उनीहरुले सन्तान जन्माउने निधो गरे। तर उनीहरुले सोचे जसरी सजिलैसँग बच्चा बसेन।
चेकजाँच गराए। चिकित्सकले पहिलो सन्तानपछि लामो अन्तर भएका कारण बच्चा नबसेको बताए। खगित्रालाई अण्डा उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने औषधि दिइयो। चिकित्सकले उनलाई औषधिले काम नगरे टेष्ट्यूब बेबी गर्नुपर्ने सुझाब दिएको पदमबहादुरले बताए। उनले भने, ‘बच्चा नबसेपछि हामीले डाक्टरलाई देखायौँ, उहाँले अण्डा बढाउने औषधि दिनु भयो, औषधिले काम नगरे टेष्ट्यूब बेबीबाट जन्माउनुपर्छ भन्नु भएको थियो।’ खगित्राले चिकित्सकले भने बमोजिम औषधि खाइन्।
खगित्रालाई टेष्ट्यूब बेबी गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन। उनी गर्भवती भइन्। दोस्रो सन्तान जन्मिने भएपछि खगित्रा र पदम खुसी थिए। गर्भवती भइसकेपछि खगित्राले निरन्तर स्वास्थ्य जाँच गराइरहेकी थिइन्।
उनको भिडियो एक्सरे गर्दा चिकित्सकले चारवटा बच्चा भएको बताएको पदमबहादुरले बताए। उनले भने, ‘भिडियो एक्सरे गरेपछि डाक्टरले चार वटा बच्चा भएको बताउनुभयो, हामीलाई पनि ओहो… चार–चार वटा अब के गर्ने भएको थियो।’
खगित्राले पहिलो बच्चा शल्यक्रिया गरेर जन्माएकी थिइन्। यसका कारण गर्भपतन गर्न उनलाई केही खतरा हुन सक्ने चिकित्सकहरुले बताए। चिकित्सकको भनाइलाई मध्यनजर गर्दै खगित्रा र पदमले बच्चा जन्माउने निर्णय गरे। धनगढीमा सुत्केरी हुँदा आइपर्ने जटिलताका कारण आफूहरु काठमाडौँ आएको बताए।
उपचारका लागि काठमाडौँ आएका उनीहरुले मेडिकल कलेजमा डा. उर्मिला कार्कीलाई देखाए। खगित्राको जिम्मा आफूले लिने भन्दै डा कार्कीले पदमलाई ढाडस दिइन्।
उनको स्वास्थ्य अवस्थामा आफूले सके जति सबै गरेको डा. कार्कीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘मैले अझै केही दिन पर जान्छ कि भन्ने सोचेकी थिएँ। तर खगित्रालाई गाह्रो भएपछि हामीले उनको शल्यक्रिया गरेका हौँ।’
आठ महिनाको गर्भपछि शल्यक्रियामार्फत जन्मिएका बच्चामा तीन छोरा र एक छोरी छन्। पहिलो बच्चाको तौल एक किलो सात ग्राम, दोस्रो बच्चाको एक किलो पाँच ग्राम, तेस्रो बच्चाको एक किलो ४ ग्राम र चौथो बच्चा एक किलोको छ।
शल्यक्रिया पश्चात चारवटै बच्चालाई एनआइसीयू र आमालाई पोष्टडकमा राखिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्,‘अहिले आमा र बच्चा गरी पाँचै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ।’
अन्तिममा जन्मेको स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिए पनि अहिले उक्त बच्चामा सुधार आइसकेको डा. कार्कीले बताइन्।
शल्यक्रिया पश्चात चार वटा बच्चा जन्माउन सफल भएकोमा आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको डा. कार्कीले बताइन्। उनले भनिन्,‘मैले यतिका वर्ष काम गरेँ तर चा वटा बच्चाको अनुभव यो पहिलो हो, म पुरै ‘एक्साइटेड’ थिएँ।
एकैचोटी चार बच्चाका बाबु बनेका धनगढीका पदमबहादुर शाही ।
तर, चार वटा बच्चा जन्मिँदा आफू दुःखी भएको पदमले बताए। उनले भने, ‘चार वटा बच्चा जन्मेको म २ प्रतिशत खुसी छु भने ९८ प्रतिशत दुःखी छु। मलाई अर्को तनाव भइरहेको छ, यी बच्चाको लालनपालन के कसरी गर्ने हो?’
पछिल्लो केही दिन यता उनको तौल बढेको थियो। यसले गर्दा हिँड्डुलमा खगित्रालाई समस्या हुन थालेको थियो। फेरि ज्वरो पनि आयो। डा. कार्कीको सल्लाह अनुसार आठ महिनामै शल्यक्रिया गरिएको पदमले बताए।
बच्चा बढेर जाँदा पाठेघर निकै तन्कनेसमस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएका कारण खगित्राको शल्यक्रिया गरिएको डा. कार्कीले बताइन्।
Posted byईमेची डेक्स September 27, 2019 October 30, 2019 Posted inभिडियो